मंगलबार, भगवान गणेशको पूजा अर्चना र व्रत किन बस्ने ? यस्ताे छ धार्मीक विश्वास – Butwal Sandesh
मंगलबार, भगवान गणेशको पूजा अर्चना र व्रत किन बस्ने ? यस्ताे छ धार्मीक विश्वास
आज मंगलबार । मंगलबार भगवान गणेशको पूजा अर्चना र व्रत बस्दा फाइदा पुग्ने हिन्दू धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि शुभ कार्यको सुरुवात गर्दा सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशको पूजा गरिन्छ। मंगलबार सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुद्ध मनले भगवान श्रीगणेशको पूजा गर्नु उत्तम मानिन्छ।
मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने धार्मीक विश्वास छ। शास्त्रमा भगवान गणेशको पूजा विधि १६ भागमा उल्लेख गरिएको छ।
पंचामृतले स्नान: गं गणपतये नम: पंचामृतस्नानं समर्पयामि । मन्त्रोच्चारण गर्दै पंचामृत से भगवान गणेशको मूतिलाई नुहाउनुपर्छ । पंचामृतमा दूध, दही, घ्यू, मह र शक्करको मिश्रण पर्छन् । यी पाँच चिजको मिश्रणले भगवान गणेशलाई नुहाउनुपर्छ ।
आफूले भूलबस गरेका अर्थात जानी नजानी भएका गल्तीका लागि क्षमा माग्नुपर्छ ।